के अब मास्कको फेसन चल्छ ? - ई-फारबेष्ट.com
कला तथा साहित्य मनोरञ्जन
Posted on August 7, 2020 August 7, 2020 Author ई-फारवेष्ट.com	Comments Off on के अब मास्कको फेसन चल्छ ?
Posted on August 3, 2020 September 15, 2020 Author ई-फारवेष्ट.com
नेपाली फिल्मको एक मात्र ‘महानायक’ राजेश हमालः अनुप
नायक राजेश हमाललाई दर्शकले ‘महानायक’ मान्छन् । नेपाली चलचित्रकर्मीमा भने हमाललाई दिइएको यो उपाधीमा समर्थन र विरोध देखिन्छ । निर्देशक दीपाश्री निरौलाले ‘राजेश हमाल पनि महानायक हो र’ भनेर दिएको एउटा बयानले ठूलै चर्चा पायो । यो बिषयमा राजेश र दीपा दुबैले मुख खोलिसकेका छन् । तर, पनि चलचित्र क्षेत्रमा हमाललाई दिइएको यो उपाधीमा बहस […]
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिका रीस्ता बस्नेत नयाँ नाम होइन । केही बर्ष अगाडिसम्म उनलाई चलचित्र खेल्न भ्याई नभ्याई थियो । चलचित्र ‘होस्टेल’बाट यो क्षेत्रमा पाइला राखेकी रीस्ताले केही चलचित्रमा निरन्तर अभिनय गरिन् । रीस्ताले पनि चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ परिचय बनाइरहेकी थिइन् । तर, बक्स अफिसमा निरन्तर चलचित्र असफल भएपछि उनी ब्याक भइन् । उनका नयाँ […]
धनगढीमा अनियमित विद्युत कटौती हुन थालेपछि नगरबासी मारमा
Posted on September 5, 2020 September 5, 2020 Author ई- फारवेष्ट